छोरी बिनाको संसार कल्पना गर्न सक्दिन Not without my daughter
यो संसारमा आमाको महिमा अपरम्पार छ । आमा बिनाको संसार नै अपूर्ण मानिन्छ । आमा यानेकि नारीलाई देवीको स्थान दिईएकोछ । आमाको माया, त्याग र बलिदानको कुनै मोल नै छैन । यस्तो अनमोल मायाको वर्णन गर्न शब्द कम पर्छ । अनि म पनि बनें एक भाग्यमानी आमा...
आजकै दिन अर्थात अगस्ट २० तारिख (भाद्र ४ गते) म आमा भएको दिन र मेरी अनमोल परी छोरीको यस धर्तीमा आगमन भएको दिन । मेरी छोरी समायरा १० वर्ष पूरा गरी ११ मा लागिन् । मेरा निम्ति छोरी हुर्किदै गर्दा संगसंगै बिताएका यि वर्षहरू अस्ति जस्तै लागिरहेछ। आजको दिन एक किसिमले हामी दुबैको नयाँ जीवनको जन्म भएको सबैभन्दा खुशी र महत्वपूर्ण दिन पनि हो। मैले अहिले सम्झिरहेकोछु ती पलहरु जुन धुलीखेल अस्पतालको प्रसुतीगृहमा म प्रसवपीडाबाट टडपिरहेको । नर्मल डेलिभरीको लागि धेरै प्रयास गर्दा पनि, तीन पटकसम्म भ्याकुम लगाएर प्रयास गर्दा पनि मैले छोरीलाई जन्म दिन नसकेपछि ईमर्जेन्सी रूममा मेरो सि-सेक्सन गर्नु पर्ने भएको थियो अर्थात मेरो पेटको तल्लो भागको अपरेसन गरेर छोरीको जन्म दिनु पर्ने भयो । मैले जुनसुकै हालत र प्रकृया अपनाएर पनि मेरो छोरीको जन्म दिन चाहन्थें, छोरीको मुख हेर्न म अति लालायित थिएँ। मलाई मेरो जीवनसंग प्रवाह थिएन जति छोरिको नयाँ जीवनसंग ।
एकातिर, म बेहोस्, अर्कोतिर, मेरी छोरीलाई मेरा दुई खुट्टाको टांग मुनी राखिएको रहेछ । जब म होशमा आएँ, आँखा खोल्ने बित्तिकै नर्सको सामू मैले पहिलो प्रश्न गरें- "मेरी छोरी खोई ?" एनेस्थेसियाले मेरो जिउ अझै हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा फर्किसकेको थिएन। त्यसैले मेरो र छोरीको हेरचाहमा खटिएको नर्सले छोरी संगै छ भनेर मेरो खुट्टातिर ईशारा गरिदिईन् । मैले राम्रोसंग हेर्न सकिन । तर मलाई मेरी छोरीलाई मेरो काखमा राखेर धित मरुन्जेल हेर्न, छातिमा टाँसेर यती धेरै माया गर्न र एकाकार बन्न आतुर भैसकेको थियो । मैले मेरी छोरी मेरो कोखबाट यो धर्तीमा आउँदा रोएको पहिलो स्वर सुन्न पाईन किनकि मै बहोस् थिएँ। तर जब नर्सले मेरी छोरी मेरो हातमा थमाईदिईन् म हर्शबिभोर हुन पुगें। छोरीको धपक्क बलेको जस्तो मासुम अनुहार र मन्दमन्द मुस्कान दिएजस्तो पोटिलो ओंठ देखेर । यती राम्री र स्वस्थ छोरी देखेर म एक्छिन् त केही बोल्न पनि सकिन। म त हेरेको हेरेई भएँ । मलाई आफूले १० महिना आफ्नो गर्भमा राखेर जन्माएको भनेर बिश्वास गर्न मुस्किल परिरहेको थियो। म सपनामा छु जस्तो लाग्यो तर यो एउटा सुनौलो बिपना थियो, हकिकत थियो। मैले आफैलाई चिमोटें र आस्वस्त पारें । म पनि मेरी आमा, हजुराआमा जस्तै आमा बन्न सफल भएकोमा गौरवान्बित बनें। संसार भरका ति भाग्यमानी आमाहरुलाई मनमनै नमन् गरें । आमाको समर्पण र महिमाको महत्ता बल्ल थाहा पाएँ ।
छोरी जन्मिनेबित्तिकै र पहिलो दिन मेरो दुध आएन । हस्पिटल बेडमै छोरी भोकाएर रुन थाली ।छोरीको यो हालत देखेर मलाई छटपटी हुन थाल्यो । हाम्री आमाले छोरीलाई अर्को वार्डमा लगेर कुनै सुत्केरी आमाको दुध खुबाएर ल्याईदिईन्, म धन्य भएँ ति अपरिचित आमा प्रति। एक मन त छोरीलाई पहिलो सिर्का दुध छोरीलाई खुवाउन नपाएकोमा म दुखित बनें तर छोरी रून छोडेर मस्त निदाएको देख्दा खुशीले गदगद भएँ। ति अपरिचित सुत्केरी आमा को होलिन्? मैले अहिले पनि मेरी छोरीलाई दुध पिलाउने ति आमालाई सम्झिन्छु, उनी को होलिन्? मेरो सि-सेक्सन गरिदिने डा. आभालगायत नर्सहरू र धुलीखेल अस्पतालप्रति म संधै आभारी छु।
म पनि घरको एक्ली छोरी। जिन्दगीमा केही गर्नु पर्छ र आफ्नो आईडेन्टिटी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता संधै मनमा राखेर अध्ययन गरें। मैले ग्रामिण बिकासमा मास्टर्स गर्दा होस् या छोरीकि आमा भएर यिनको स्याहारसुसारमा लाग्दा होस्, मैले ‘असल मान्छे’ बन्ने मेरो धेय कहिल्यै छोडिन्। छोरीको उमेर पाँच वर्षदेखि मैले सिंगल मदरकोरूपमा मैले मेरी छोरीनै केन्द्रविन्दूमा राखेर जीवन अगाडि बढाईरहेकीछु र मैले आफूलाई संसारकी भाग्यमानी आमाहरू मध्येकि आमा ठान्दछु। छोरीप्रतिको मेरो जिम्मेवारी र हाम्रो सम्बन्ध नंग र मासुको जस्तो छ। उनी मेरी आँखाको नानी र मुटुको टुक्रा जस्तै हुन्। छोरीबिनाको मेरो जीवन म कल्पना पनि गर्न सक्दिन।
प्रिय छोरी, आज तिम्रो जन्मदिनमा मैले दिन सक्ने अनमोल उपहार मेरो नि:सर्त स्नेह, माया र आशिर्वाद हो। मैले तिमीलाई एक एन्जलकोरूपमा मेरो जीवनमा आएको मानेकीछु। तिम्रो ज्ञानीपना, शालिनता र बालसुलभ भोलीभालीपनबाट मैले धेरै सिकेकोछु, रमेकोछु र गौरवीभूत भएकीछु। तिमी यसरीनै ठूली हौ है भन्न चाहन्छु। अर्को जन्ममा यदि म फेरी आमा बन्ने अवसर पाएँ भने मेरो गर्भमा फेरी तिमीलाईनै कन्सिभ गर्न चाहन्छु र यसपाली दुधको पहिलो सिर्का मेरै दुधबाट पिलाउन चाहन्छु।
प्रिय छोरी, यो पर्देशीभूमिमा तिम्रो र मेरो संघर्षको ब्याथा र मायाको कथा एउटा उदाहरण हो।भगवानले पनि हामी आमा-छोरीलाई परिपूरक बनाईदिएकाछन्। म र मेरी छोरी जस्तै अरू थुप्रै सिंगल मदरहरू र छोरीहरू कति होलान्। हामीले यो सपनाको मुलुकमा हाम्रो सुन्दर सपना साकार पार्नुछ, संघर्षको खुट्किलोहरू पार गर्नुछ र संगसंगै एउटा सिंगो जुग जीउनुछ। प्रिय छोरी, जन्मदिनको लाखौंलाख शुभकामना।